ကစားတဲ့ chat ။ 2022
ဆက်သွယ်ရေး - ခေတ်သစ်လူသား၏အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အလုပ်သမားနေ့ပဲ, စကားပြောဤအကြောင်းကို chat နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်အပြီးသာနှောင်းပိုင်းတွင်ညဦးယံ၌နိုင်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါအများဆုံးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်ဦးအဖော်ရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်အခက်အခဲရှိပါသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သငျသညျအိမျတျောကိုစွန့်ခွာဖို့တစ်နေရာရာလိုအပ်ပါတယ်။ တဖန်အလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်လေ့လာဖို့မနက်ဖြန်။ ယခုမှာဆက်သွယ်ရေး၏ပြဿနာကိုခေတ်မီလူကိုရင်ဆိုင်နေရသည်: ငါအလိုတကယ်သင်ရုံဘဝအကြောင်းကို "ထွက်ဝတ်ဆင်" နိုငျဘယ်သူကိုအတူအဖော်, ဝေဖန်တစ်စုံတစ်ဦးကိုချီးမွမ်းဖို့, ခေတ်ရေစီးကြောင်းရုပ်ရှင်ဆွေးနွေးရန်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်၏နောက်ဆုံးထိပ်တန်းအဆုံးတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့ချင်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုသို့အိမ်တော်ကိုစွန့်ခွာခြင်းနှင့်ဖွင့်ဟောပြောချက်တစ်ဦးအမြင်ဖြင့်တစ်နေရာရာကိုချွတ်လှည့်လည်ရန်အချိန်မရှိပါ။ ယခုမှာမလွတ်မြောက်ရှိကွောငျးပုံရသည်။ သို့သော်မရစိတ်ပျက်လက်ပျက်လုပ်ပါ။ ခေတ်မီနည်းလမ်းများနှင့်တန်ခိုးရှင်အင်တာနက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, လူတိုင်းအတွက်ယခုတိုက်ရိုက်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့စံပြတင်ပါတယ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကွန်ယက်သည်ခေတ်သစ်လူကိုတောင်မှသူကအိမျတျောကိုစွန့်ခွာရန်လိုအပ်သောဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားရန်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆက်သွယ်ရေးဘို့ဤမျှလောက်များစွာသောအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်။ ငါကဗီဒီယိုချက်တင်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြချင်။ သို့မဟုတ်အစား, လူကြိုက်အများဆုံး video chat နှင့် ပတ်သက်. 10 မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်။ ဒါကြောင့်အဲဒီမှာ you go:
1. videochat ကဘာလဲ?
video chat ယနေ့ - အဓိကအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများထံမှကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုး၏ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာသင်တန်း၏, အရင်းအမြစ်များကိုတစ်ဦးအခြို့သောဘာသာစကား, သို့မဟုတ်တဦးတည်းအချို့သောတိုင်းပြည်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြရသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီသယံဇာတများ၏အမြောက်အများနိုင်ငံစုံပါပဲ။ ကလူကဗီဒီယိုကင်မရာများအားဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုအဘယ်မှာရှိ။ အဆိုပါပါတီများကိုတွေ့မြင်ကြားတစ်ဦးချင်းစီကတခြား, ဒါဆက်သွယ်ရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလွန်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌တွေ့ဆုံရန်ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်ပါ။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်နှင့်အတူ) လက်ဖက်ဘယ်သူ့ကိုမှ 8 ဆက်ဆံဖို့မရှိပါဘူးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ
ဗီဒီယိုချတ် VIDEOCHAT ကစားတဲ့အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်အဘယ်အရာကို 2,?
အတော်ကြာအမျိုးမျိုးနှင့်ချတ်ဒမျိုးရှိပါတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာတင်ပါတယ်ကို select နှင့် chat စတင်နိုင်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့၏အရင်းအမြစ်များကိုသုံးပါနှင့်ကိုယ်အဘို့ဆက်သွယ်ရေး ပို. ပင်အစွန်းရောက်စေနိုင်သည်။ ထိုအလွန်းသည်တင်ပါတယ်သည်။ အစွန်းရောက်ကဘာလဲ? ဘယ်သူမှမိမိအတင်ပါတယ်ရွေးကောက်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ ဤချတ်ထဲမှာတင်ပါတယ်မတော်တဆမှုအားဖြင့်လုံးဝကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ သင်နောက်တစ်နေ့အချိန်လေး (သို့မဟုတ်မိနစ်သို့မဟုတ်ပင်နာရီ) ကျော်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတော်မူသောအားဖြင့်လူတစ်ဦးအကြောင်းကိုကြိုတင်ဘာမှအတွက်သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤတွင်, အရာအားလုံးမတော်တဆဖြစ်ပါသည်: အရင်းအမြစ်များ၏ရွေးချယ်မှုကိုဆက်သွယ်ရေး၏အချိန်, ဆက်သွယ်ရေး၏ဘာသာစကား, ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက်, etc, etc, etc ဒါကပဲ chat ရှိသှားတဲ့သူအများဆုံးလူတို့အဘို့ကစားတဲ့ chat ဆွဲဆောင်မှုနဲ့။
အဆိုပါ videochat ကစားတဲ့၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်သူက 3. ?
တကယ်တော့အားဖြင့်၎င်း, ကြီးမားတဲ့အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ သင်တန်း၏, တစ်ပါတီအသက် 18 နှစ်အောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်, 18 ကျော်လူငယ်လေးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင်, သင်ကြိုဆိုကြသည်။ခေတ်သစ် ChattRoulette ဆက်သွယ်ရေးပုံစံအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာဘုံခန်း၌သဟာယနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကဒါခေါ်ပုဂ္ဂလိကချက်တင်ထဲမှာ chat ။ မည်သည့်ဖြစ်ရပ်အတွက်တစ်ပါတီ 18 နှစ်ထက်အသက်ကြီးမဆိုလူတစ်ဦးရှိနိုင်ပါသည်။ အသက်အရွယ် မှလွဲ. လုံးဝကျားမအပေါ်ကန့်သတ်, နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးအမြင်များနှင့်အခြားကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ဤနေရာတွင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးစီးပွားနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလူဖြည့်ဆည်း။ ထိုသို့သိပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ သငျသညျဤလူပိုခဲကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌ ပို. ပင်ဒါကြောင့်တွေ့ကွောငျးသိရအထူးသဖြင့်အခါ။
အခမဲ့ videochat ကစားတဲ့အပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အခြေခံငွေပမာဏ။ သို့သော်တစ်ဦးပေးဆောင်ပူဇျောသက်ကာရှိသေး၏။ ဒါဟာတစ်စိုးမိုးရေးအဖြစ်ရွေးချယ်ထားသည့်နိုင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်ရွေးချယ်လို့မရပါဘူး။ အထူးသဖြင့်သူတို့ထဲကအများစုဟာလုံလောက်သောနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဆက်သွယ်ရေးကြောင့်။ တစ်ဦးအခကြေးငွေအဘို့ - ဒီတော့အခမဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ထိုပါလိမ့်မည်ရဲ့တိပ် videochat အပေါ်ကြောင်းအရကုန်အံ့။
vozmozhnost ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အထူး goroda
zanesenie ပေါ့ပေါ့အဖော် obscheniyu
ဟုတ်ပါတယ်, တစ်ဦးချင်းစီ videochat တိပ်အနည်းငယ်ကွဲပြားစေခြင်းငှါအပိုဆောင်းအချက်များရှိပါသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်စာရင်းဝင်ကြပါပြီအဓိကအချက်များ။
လူတစ်ဦးကကြိုက်နှစ်သက်မပါဘူးဆိုရင် 5. ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း
တကယ်တော့အရာအားလုံးချက်တင်ကစားတဲ့အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုခံစားခဲ့ရတိုင်းဧည့်သည်မှယနေ့ပြုမိသည်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်, မတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက်အားလုံးမိတ်ဖက်ကျနော်တို့ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ အားလုံးအတိအကျကိုမှန်ကန်ဘဝ၌ရှိသကဲ့သို့။ တစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်တော်ကိုချစ်နှင့်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ဦးနှငျ့ဆကျသှယျဖို့ဆက်လက်။ နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကလုံးဝကိုအကိုက်ညီမပါဘူး, ဤပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆက်သွယ်ပြောဆိုချင်ပါဘူး။ သို့သော်ကျွန်တော်တို့ကိုအွန်လိုင်းပြီးတော့ကျနော်တို့မကြိုက်ဘူးသောသူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ငြင်းပယ်ရန်အဘို့အအစစ်အမှန်အသက်တာ၌ခက်ခဲလျှင်အလိုရှိသောအောင်မြင်ရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့လွယ်ကူပါတယ်။ သငျသညျရုတ်တရက်အရင်းအမြစ်မကြိုက်ဘူးလျှင်, ကို turn off ဖို့သိပ်ကိုလွယ်ကူသည်။ ဤ "လာမယ့်" ဟုခေါ်တဦးတည်းခလုတ်ကိုနှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ "လာမယ့်": angliykom ဘာသာစကားတွင်, ဒီခလုတ်ကိုအဖြစ်တံဆိပ်ကပ်နေသည်။ သကဲ့သို့မကြာမီသင်ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်များအတွက်လာမည့်သမ္မတလောင်းဆက်သွယ်ဖို့အကြံပြုအဖြစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့ပါပဲ။ သို့သော်ထိုသို့ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားနှင့်အဖော်အဖြစ်သငျသညျကိုပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဖြစ်ရပါမည်။ တဖန်သင်တို့နည်းတူကောင်းစွာအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကူးအပြောင်းများနှင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ထိုအသင်ပြုဘာမျှတကယ်တော့မရှိနိုငျပါသည်။ ထို့ကြောင့်တဦးတည်းတစ်ခုတည်း "လာမယ့်" ခလုတ်ကိုနှင့်ကဲဒါဆိုရင်တော့သင်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ရှေ့တော်၌ကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်ရှိသည်။
6. ကို "ပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေး" နှင့်ဘယ်လိုရဖို့ကဘာလဲ?
မည်သည့် Chatt ကစားတဲ့မှာဆကျသှယျအများအပြားခန်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဓိကနှစ်ခု:
ဘုံအခန်းထဲမှာအောက်၌ရှိသမျှသောအာကာသအရင်းအမြစ်သိနားလည်ကြ၏။ ဤတွင်, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလူတိုငျးအတှကျတူညီကြသည်။ မတော်တဆမှုအားဖြင့်ဘုံခန်း၌မဆိုဆက်သွယ်ရေး။ နှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် "လာမယ့်" ခလုတ်ကိုကိုတိုက်တွန်းဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပါဝင်သူများထဲမှတစ်ဦးသည်အထိယခုအချိန်တွင်မှအတိအကျနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီ button ကို (သောသူမရှိကိစ္စ) ကိုဖိပြီးတာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးရပ်စဲလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းမှသာယာသောခြွင်းချက်လည်းရှိသေး၏။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်, ဆန္ဒရှိလျှင်, ပုဂ္ဂလိကအခန်း၌ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကအခန်းက - ဆက်သွယ်ရေးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်အတူတူပင်ယခုအချိန်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းခလုတ်ကို၏ထိတွေ့မှာနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လိုချင်သောအဖြစ်ကြာသည့်အခါဤအရာအရင်းအမြစ်ကစားတဲ့အပေါ်အထူးအကာကွယ်အာကာသဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကချက်တင်တဦးတည်း postronny ထိုးဖောက်မရနိုငျသော, တစ်ဦးတည်းအားလုံးသဟာယအထက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဘုံခန်း၌ထက်အနည်းငယ်ပိုတတ်နိုင်တဲ့အခါဒီဆက်သွယ်ရေး။ ထိုသို့ပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေးအများဆုံး video chat ကစားတဲ့အပေါ်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေးဇုန်အတွက်တိကျတဲ့တင်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ဖို့, ထိုသို့ပေးဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့နှင့်ကဲဒါဆိုရင်တော့ချက်တင်အခန်းကိုဖွင့်ထားကြလိမ့်မည်နှင့်စကားပြောဆိုမှုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေးင်နှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မှဧည့်သည်များအများစုကိုဆွဲဆောင်။
ဟုတ်ပါတယ်, တချို့ကန့်သတ်ပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေး၏ဧရိယာ၌, ဒီမှာတည်ရှိနှင့်။ သူတို့ကဒီပုဂ္ဂလိကဧရိယာများအတွက်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်မတိုင်မီသို့သော်ဤကန့်သတ်များ၏အမြောက်အများကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
7. သင် videochat ကစားတဲ့အတွက်ဆကျသှယျဖို့ဘာလိုအပ်သလဲ?
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် (ပင်အော့ဖ်လိုင်း mode မှာ) ဆိုအချို့သော tools များနှင့်အရင်းအမြစ်များလိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါလျှင်, ရန်ပုံငွေမှအချို့သောလိုအပ်ချက်များကိုလိုအပ်ပါတယ်ရှိသေး၏။ တကယ်တော့နီးပါးတိုင်းခေတ်သစ်လူကိုအလွယ်တကူဆိုဒ်ကိုကစားတဲ့ဗီဒီယိုချတ်သွားနှင့်မဆိုပေါ့ပေါ့ conversationalist နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးစတင်နိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်ဒီမှာသူတို့က, ChatRoulette အတွက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်လိုအပ်ကြောင်းအရှိဆုံးအနည်းငယ်မျှသာလိုအပ်ချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
ဗီဒီယိုက mode ကို formata
horoshego အရည်အသွေးကို mikrofon
မူအရ, ဒီသင်ဤအရင်းအမြစ်အတွက်ဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝကျကျသည်မိုက်ခရိုဖုန်းမှလိုအပ်ချက်များကိုနှင့် webcam ပင်မတန်တဆရပါမည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးဖြစ်ရပါမည်။A ကောင်းဆုံးမိုက်ခရိုဖုန်း - အောင်မြင်သောဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အရေးအပါဆုံးနည်းလမ်းတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ။
webcam - ကလည်းအလွန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းသော webcam နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲပုံရိပ်တွေနဲ့ဗီဒီယို၏အပြောင်းအရွှေ့လွယ်ကူချောမွေ့သငျ့သညျ။ အဘယ်အရာကိုမျှကင်မရာနှစ်ဖက်စလုံးတွင်လူများ၏စကားပြောဆိုမှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်သင့်ပါတယ်။
နှင့်သင်တန်း၏, ကွန်ပျူတာသူ့ဟာသူမဟုတ်ဘရိတ်ပြုပါရန်လုံလောက်သောအင်အားကောင်းသောဖြစ်ရမည်။ ဒါကဘာမျှဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်။
ကစားတဲ့ chat - အဓိကအားဖြင့်ပျော်စရာ pastime ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တိုင်းဧည့်သည်ပျော်စရာ၏ရည်ရွယ်ချက်ဒီမှာလာမယ့်နှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်လူတို့နှင့်အတူ chat မရှိလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါဆက်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်တစ်ဦးကိုကျပန်းရွေးချယ်ရေး - လည်းအတော်လေးပျော်စရာပါပဲ။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ငါပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူသော်လည်းပေမယ့်ဆက်သွယ်ရေးအချို့ parameters တွေကိုအတူစကားပြောချင်တယ်။ ထို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်များနှင့် developer များကြိုးစားဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့သည်ဧည့်သည်ပဲမည်သူမဆိုအတူပြဿနာတစ်ခုမဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပေမယ့်တစ်ဦးတင်ပါတယ်အဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လိမ့်မည်သူကိုအကြောင်းကိုသိရန်ကြောင်းသေချာစေရန်တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးလုပ်ပါ။ အနည်းဆုံးအကြမ်းဖျင်း။ ကစားတဲ့မိတ်ဖက် videochat အများဆုံးအရင်းအမြစ်တွေကိုတွင်အောက်ပါယနေ့ရွေးချယ်နိုင်သည်
သူတို့ပြောသကဲ့သို့ဒါဟာအဖော်များအတွက်, select လုပ်ပါအဘယ်သို့ဤ parameters တွေကိုနှင့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သည်ဧည့်သည်ကဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ပြဿနာများမရှိဘဲသို့မဟုတ်ရှေးခယျြသို့မဟုတ်ပဲသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုနှင့်အွန်လိုင်းကယ့်ကိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဆက်သွယ်ရေးစတင်ရန်လက်ျာ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ videochat ကစားတဲ့အတွက်ပိတ်ပင်ထားစေခြင်းငှါအဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာ 9. ?
ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့လူတွေအကြားဆက်သွယ်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းပိတ်ပင်ထားခံရခြင်း၏အန္တရာယ်ကအမြဲရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအထူးဒီအံ့သြစရာအရင်းအမြစ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဧည့်သည်ကိုပိတ်ပင်ခဲ့နိုင်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့။ ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ပိတျပငျအောက်ပါတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖောက်ဖျက်ကြောင်းအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်ချမှတ်ထား:
oskorblenie ။ ယေဘုယျအားဖြင့်မဆိုစော်ကားနေတဲ့ပိတ်ပင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤအရင်းအမြစ်အတွက်မဆိုဆက်သွယ်ရေး၏အခြေခံ - တစ်ဦးယဉ်ကျေးများနှင့်အပြန်အလှန်လေးစားမှု။
reklama တစ်ခုခု။ Advertising ကြော်ငြာခွင့်ပြုမထားပေ။ နှင့်မှန်ကန်စွာဒါ။ တကယ်တော့ဆိုက်လူတို့သည်မိမိတို့အမြင်များကိုစကားပြောနဲ့မျှဝေဖို့ဖန်တီးခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကို advertise နားမထောင်ကြ။
spam လည်းတားမြစ်လိုက်သည်။ သို့တိုင်, ငါကသာ spam ဖြန်များအတွက်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်ဆိုပါကအဘယ်သူမျှမက, ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။လွင်ပြင်နဲ့ရိုးရိုးတားမြစ်ချက်။ သင့်ရဲ့တင်ပါတယ်သူတို့ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းနှင့်အရှင်လိင်ဆက်ဆံမှုခံစားထံမှသင်တို့တားဆီးလျှင်, သင်အမြဲသည်သူ၏စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲသူအကြောင်းကိုတိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်ရွက်ချက်များအလွန်လျင်မြန်စွာခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ တိုင်ကြားချက်တစ်ခုသွားလာရင်းလျှင်မည်သို့ပင်သည်, လက်ငင်းတားမြစ်ချက်ကိုလိုက်နာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သတိပေးလိုအပ်ပေသည်။ ယင်းတိုင်ကြားချက်ကိုပိုမိုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူများကပြုလျှင်ပိတ်ပင်မှုအစာရှောင်ခြင်းနှင့်မည်သည့်သတိပေးမပါဘဲဖြစ်နိုင်သည်။
10. ဒီအသုံးဝင်သော VIDEOCHAT ကစားတဲ့နိုင်သနည်း
ယနေ့ကမ္ဘာမှာရှိလူများဆက်သွယ်ရေးအတွက်အများအားဖြင့်အလွန်ကန့်သတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သော video chat ကစားတဲ့ကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်များရုံပျော်စရာရှိသည်ဖို့တစ်လမ်း, ဒါပေမယ့်လည်းလေ့ကျင့်ရေးမြေပြင်နေကြသည်မဟုတ်။ အဘယ်သူကိုသနည်း များစွာသောလူအတော်များများသည်။ ဥပမာ, ဒီသယံဇာတအောက်ပါလူများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်:
dlya ။ ဒီနေရာတွင်ရိုးရိုးအခြားသူတစ်ဦးမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြောင်းလဲပထမဦးဆုံးမှာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အနားတွင်ပုန်းများနှင့်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, စစ်မှန်သောဘဝ၌, လူတစ်ဦးကိုချွတ်နှင့်မယ့်ဒုတိယအဘို့အစကားပြောရန်ရပ်တန့်။
dlya ရှိသူများ, ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ရှာနေသို့မဟုတ်ပဲဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှငျ့ဆကျသှယျဖို့သင်ယူခြင်း။
လူတွေကိုခစျြသူတို့နှင့်အတူ chat သောသူတို့အဘို့
ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ChattRoulette အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အံ့သြစရာဂြိုဟ်၏များစွာသောလူများ၏အလွန်ကောင်းစွာ-ထိုက်တန်တဲ့လေးစားမှုရှိလိမ့်မည်။ ထိုကောင်းပါတယ်။ ဤလူမျိုးကိုနေတုန်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြင်နာတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုအံ့သြနေကြသည်ဟုဆိုလိုသည်။